Mayelana NATHI - Hebei Ubufakazi-Isekelwe Medical Technology Co., Ltd
Health all in one machine xz2010-106, meridian analyzer Wall mounted general practice diagnosis system, wfk Ukuhlolwa okuphelele kohlelo lwendabuko lwamaShayina Medicine, uhlelo lokuhlola ubungozi bezempilo lwe-HRE 12 izivivinyo zomzimba ezijwayelekile, ukuphathwa kokuhlolwa kwengozi yabasebenzi Izinqolobane ezenziwe ngokwezifiso ze-elekthronikhi kanye nemodeli enkulu yedatha.
I-Xz2010-106, imitha kashukela egazini leshukela:
Ngaphambi nangemva kokudla, i-glucose yegazi, umfutho wegazi nohlolo lwe-oxygen oxygen. Impendulo yedatha yesikhathi sangempela, isazi sokudla okunomsoco online sikhiphe uhlelo lokudla okunempilo.
Health all in one machine xz2010-106, smart mattress smart, Xikang Xinxibao: (sleep, home) Ukuhlolwa ngokomzimba okujwayelekile, ukuqapha kwesikhathi sangempela seziguliIzimpawu ezibalulekile, ukubuya kwedatha, - ucingo lokhiye oluphuthumayo lwe-SOS.
Iwashi lesihlakala esihlakaniphile le-X8, i-electrocardiograph ene-ambulensi Xikang xinxinbao: (ngaphandle) Ukuqapha kwesikhathi sangempela kwezimpawu ezibalulekile, ukuvimbela izifo ezingalapheki; Ukubuya kwedatha yesikhathi sangempela, ukuqapha kwesikhathi sangempela. Ucingo olulodwa oluphuthumayo lwe-SOS, odokotela, amalungu omndeni Ukuqapha nokuma oku-inthanethi.
Uhlelo lwe-Wfk TCM oluphelele lokuxilongwa, uhlelo lwe-HRE lokuhlola ubungozi bezempilo, ipulatifomu yefu le-AI Ochwepheshe abadumile basebenzisana ku-inthanethi ngesikhathi sangempela, Ukuvuselelwa kwesikhathi sangempela kwezinqolobane ze-elekthronikhi nokwethulwa kwedatha enkulu yezimpawu ze-Vital, ukuqondiswa kwemithi nokuhlaziywa kokumelana nezidakamizwa Izitolo zemithi yomphakathi wezokwelapha ziletha umuthi ekhaya .
Funa iseluleko sezokwelapha
Isiginali ehlakaniphile, ishaneli yokudlulisela okuluhlaza: Isibhedlela iXuanwu, i-Union Medical College Hospital, ukubambisana kwe-Hierarchical ekuxilongweni nasekwelashweni. (ukuhlolwa, ukuqapha, ukwelashwa kokungenelela Ukuphathwa kwezempilo) Izinsiza zokwelashwa zezibhedlela ezintathu eziphezulu e-China Ukwelashwa kwezilwandle, njll.